Maalinka lashaacin doono heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu biirayo Juventus oo la ogaadey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maalinka lashaacin doono heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu biirayo Juventus oo la ogaadey?
(08-07-2018) Wararka ugu danbeeya ee laga helayo heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu Wareegayo Juventus ayaa sjeegaya in Maalinka Talaadada ah ee nagu soo food leh lashaacin doono heshiiska rasmiga ah ee labada dhinac.
Wargeyska Marca ayaa sheegayaa in Cristiano Ronaldo uu u dhaqaaqi doono Juventus kadib markii Real Madrid ogolaatay in ay qaadato aduun lacageed gaaraya €100m lacagtaas oo ah mida lagu kansalayo qandaraaskii uu dhawaan Saxiixay.
Sidoo kale Wargeyska Mediaset Premium ayaa daabacay in 10 ka bishaan ay kulmi doonaan Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez iyo Madaxda ugu Saraysa Juventus kuwaas oo si wada jir ah Saxaafada ula hadli doona isla markaana ku dhawaaqi doona heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu Wareegayo Juventus oo ah koox siweyn u doon dooneysa Xiddiga dalka Portugal.
Cristiano Ronaldo ayaa lacadeeyey in ay ka Go.antahay in uu ka tago Real Madrid isla Markaana uu doortay Juventus oo ah koox magac weyn kuleh Talyaaniga iyo qaarada yurub intaba.